ကလိုစေးထူး: ရွှေပြည်တော်သို့ မျှော်ကြည့်ခြင်း...
တခေါက်တခါ ခေါ်ချင်စမ်းပါပေ့ ..
ရုန်းလိုက်ဟဲ့ဖေ့သား၊ ကုန်းစိုက်ကွဲ့ နှမငယ်
ကမ္ဘာကို ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ဖို့ ကြုံးရုန်းစို့ကွယ်။
ပြွတ်သိပ်ကာ တိုးလို့စီးပါလို့ ခရီးဆက်စို့ကွယ်။
“ထည့်ပါလေ တကျပ်တပြား” ပါလို့
ကားကြားမှာ အလှူခံရတယ် …
သာသနာနောက်ဖျားက ယောက်ျားအာဇာနည် ..
မြန်ပြည်က သံဃာများ … သနားစဖွယ်။
တငွေ့ငွေ့လေးနဲ့ အတော်လာတယ် …
ကဲ … တမျိုးသားလုံး စိတ်ဓာတ်နဲ့
ကောင်းစားကြမှာက သူတို့ပေါ့ ရှုကြည့်လော့ကွယ်
ကိုယ်လုပ်လို့ ကိုယ်ရ၊ ကိုယ်မဟုတ်လို့ ကိုယ်ကျ
အဝေးမှသာ ငေးရပါတော့တယ် …. ။
(အဲဒီပုံတွေကတော့ မြန်မာပြည်ကို လာလည်သွားကြတဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေက သူတို့ရဲ့အမြင်၊ သူတို့ရဲ့ အတွေးတမျိုးမျိုးနဲ့ မှတ်တမ်းတင်သွားကြတဲ့ ပုံတွေပါ။ အဲဒါတွေကို တွေ့တော့ ကျနော်က တမျိုးခံစားရပြန်လို့ ဒီမှတ်တမ်းကို တင်ပါတယ်။)
Posted by ကလိုစေးထူး at 7:26 PM
omg...it's so sad.
Feb 1, 2007, 10:34:00 PM
အရမ်းကောင်းတဲ့ post ... thanks
Feb 1, 2007, 11:50:00 PM
A random thoughts ofaBurmese man said...
Feb 2, 2007, 6:03:00 AM
မျှော်ပါပေါ့လေး .. ။
မရောက်နိုင်ရှာ … ဒီခရီး
နီးရက်နဲ့ဝေး … … ။ … ။
Feb 2, 2007, 6:47:00 AM
(အချစ်ရယ်..) လွမ်းရလေခြင်း..။ ။
Feb 2, 2007, 10:20:00 AM
ဟိုး.. ရှေ့မှာပန်းတိုင်ရှိတယ်.. လာ.. သွားကြစို့...
သိပ်မနီး ဝေးလွန်းလှတော့ ခြေနည်းနည်းညောင်းမည်..
Feb 2, 2007, 3:49:00 PM
အခုလို လာအားပေးကြတာကို ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ခင်ဗျာ.. တကယ်တော့ ကျနော့်စိတ်ကူးနဲ့ တင်ချင်တဲ့ ပုံလေးတွေ ရှိပါသေးတယ်. ကျနော့်ရဲ့ ကွန်ပြူတာ နည်းပညာ တတ်ကျွမ်းမှု နုံနဲ့ခြင်းရဲ့ တန်ဖိုးကို တဖြည်းဖြည်းသိလာသလိုလိုပါပဲဗျာ.. လုပ်ချင်တာတွေနောက်ကို မလုပ်တတ်တာက အတားအဆီးလိုဖြစ်နေတယ်..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို တကယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Feb 3, 2007, 11:47:00 PM